बधाई : ७० बर्षमा मास्टर्स डिग्री पास गरेकी नानीमैया श्रेष्ठ आमा, सम्मान स्वरुप सेयर गरिदिनु होला (भिडियो हेर्नुहोस) | Public 24Khabar
Home News बधाई : ७० बर्षमा मास्टर्स डिग्री पास गरेकी नानीमैया श्रेष्ठ आमा, सम्मान...
बधाई : ७० बर्षमा मास्टर्स डिग्री पास गरेकी नानीमैया श्रेष्ठ आमा, सम्मान स्वरुप सेयर गरिदिनु होला (भिडियो हेर्नुहोस)
यत्तिखेर सामाजिक संजालमा एउटा फोटो भाइरल छ । त्यो हो ७० बर्षकी आमाले त्रिविको दिक्षान्त समारोहमा लगाएको कालो टोपी अनि पोशक । सोही पोशकमा सजिएर दिक्षित भएपछि खिचिएको तस्बीरले धेरैको ध्यान खिच्न पुग्यो ।
नेपालमै बन्छ थोरै लगानिमा यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनीलाई सिधै फोन गरेर जिम्मा दिनुहोस! फोन नम्बर सहित् काठमान्डौ , कोरियाली कम्पनि एसवाई प्यानलले( SY Nepal) आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ ।
फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल प्यानलहरु उत्पादन शुरु गरेका छन् । बिभिन्न रंगको छाना र वाल २ देखि ६ इन्चीसम्म बाक्लो उत्पादन गरिने कम्पनीले जनाएको छ। शतप्रतिशत कोरियन प्रबिधि र लगानीमा स्थापना गरिएको सो कम्पनिको उत्पादनहरु भुकम्प प्रतिरोधी,।
सस्तो ,६० बर्ष टिकाउ हुने जनाइएको छ । ७२ करोड रुपैयाँ अधिकृत पुंजी रहेको सो कम्पनीले नेपालमा पहिलो पटक आधुनिक प्रबिधिद्वारा प्यानल उत्पादन शुरु । गरिएको जनाइएको छ । कम्पनिद्वारा उत्पादन हुने छाना र वाल गर्मि क्षेत्रका लागि बरदान हुने जनाइएको छ ।सो छानाले ८ देखि १० डीग्रीसम्म तापक्रम रोक्न सहयोग गर्छ ।
यो प्रविधिले चितवन लगायत तराइबासिलाई गर्मिबाट बच्न ठुलो सहयोग गर्ने छ । त्यसैगरी पहाडी र हिमाली भागमा बसोबासीका लागि पनि बरदाननै साबित हुने छ । १२ सय डिग्रीको तापक्रम कलर कोट गरिएको स्टील दुई तिर र बिचमा पोलिट़ाइरोन इन्सुलेसन गरिने भएकोले यो प्यानलले चिसो तातो रोक्न मद्दत गर्दछ ।
Previous articleखुसिकाे खबर: चम*त्कार नेपाली आकाशमा यस्तो के? नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
Next article40 लाख हस्पि*टल मा सक्दा पनि निको नभएपछि भा*इरल झाक्री को मा एम्बु*लेन्स लिएर आयो (तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ)